स्पार्टली आइल्यान्ड : अर्को ठूलो युद्धको ‘फ्लास पोइन्ट’ | Ratopati
स्पार्टली आइल्यान्ड : अर्को ठूलो युद्धको ‘फ्लास पोइन्ट’
personअरुण कुमार सुवेदी exploreकाठमाडौं access_timeमंसिर १७, २०७५ chat_bubble_outline0
अक्टोबर २६ को दिन सबैलाई अचम्म पार्दै इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहु ओमनको भ्रमणमा गए । त्यही समयमा नै उनको मन्त्री परिषद्की एक सदस्य संस्कृति तथा खेलकुल मन्त्री मिरी रेगेभ
यूएईमा आयोजित एक खेलमा सहभागी भइन् । इजरायलका प्रधानमन्त्री र इजरायलका मन्त्री अरब मुलुकको भ्रमणमा जानु भनेको केहीअघिसम्म आश्चर्यजनक घटना मानिन्थ्यो ।
एकअर्काका ‘जानी–दुष्मन’ रहेका यी दुई पक्षहरूको अस्वाभाविक ‘नज्दिकी’ले इरानविरुद्धको गठबन्धनको सङ्केत गर्छ ।
फेरि ओमनको भ्रमण जानुको विशेष महत्त्व रहेको छ । स्ट्रेट अफ हरमुजको महत्त्वबारेमा मैले विगतका प्रस्तुतिमा चर्चा गरेकै थिएँ । त्यो स्थानमा इरानलाई चुनौती दिन सक्ने एक मात्र राष्ट्र हो ओमन ।
ओमनको फेरि भारतसँग पनि राम्रो सम्बन्ध छ । इरानसँग पनि अन्य अरबी मुलुकहरूको जस्तो सम्बन्ध विग्रिएको छैन । भारत ठूलो बजार र उदाउँदो शक्ति भएकाले यो समीकरणमा भारत पनि एक खेलाडी हो ।
नेतान्याहुको ओमन भ्रमणको अर्थ
बेन्जामिन नेतान्याहुको ओमन भ्रमणले ठूलो अर्थ राख्छ । यो भ्रमणले स्पष्ट सङ्केत दिन्छ– त्यो क्षेत्रमा ठूलो युद्धको अभ्यास सुरु भइरहेको छ । साथै, इरानसँग द्वेषपूर्ण सम्बन्ध भएका अरबी राष्ट्रहरू र अझ खराब सम्बन्ध रहेको इजरायलले गठबन्धन गरेको पनि बुझ्न सकिन्छ । उनीहरूको गठबन्धन इरानविरुद्ध अपरेसनमा लाग्ने सम्भावना देखियो । त्यो अपरेसन भयो भने स्वाभाविक रूपले चीन र भारतमाथि पनि ठूलो दबाब हुनेछ । तेलको, ग्यासको अनि सामुन्द्रिक पारवहनको दबाब बढ्नेछ ।
यस परिघटनाले मध्यपूर्वको द्वन्द्व अझ बढी सघन रूपमा अघि बढेको र अझ ध्रुवीकृत भइरहेको देखिन्छ । तेलको भाउलाई लिएर युरोप र अमेरिकाबीच एकअर्कालाई दबाब दिने काम भइरहेकै छ । ग्यासको मूल्य बढिरहकै छ । तर तेलको मूल्य भने जुन दरमा बढ्नुपर्ने हो, त्यो दरमा बढिरहेको छैन । यो सबै युरोपको दबाबको कारणले हो ।
तेलको मूल्य बढ्यो भने युरोपमाथि ठूलो आर्थिक दबाब पर्छ । यही कारणले अमेरिकामाथि दबाब दिएर युरोपले तेलको मूल्यलाई बढ्न दिइरहेको छैन । हुन त यो कुराले हामीलगायत भारत र चीनलाई पनि राहत पुगेको छ ।
यसको लाभ नपुग्ने एउटा देश चाहिँ रसिया हो । किनकि ऊ तेलको मूल्य बढाउने पक्षको राष्ट्र हो ।
एकातिर पेट्रोलियम स्रोतमा निर्भरताका कारणले युरोपमाथि रसियाको दबाब हुने तर अर्कोतर्फ नाटोको सदस्य रहेकाले रसियामाथि दबाब दिनुपर्ने बाध्यता । यो चेपुवामा युरोप परेको पर्यै छ ।
आधुनिक विकासको सबैभन्दा ठूलो केन्द्र युरोप हो । औद्योगिक क्रान्ति त्यहीँबाट भएको हो । फेरि सोचको क्रान्ति पनि त्यहीँबाट भएको हो । पुनरजागरणजस्तो ज्ञानको क्रान्ति त्यहीँ नै भएको थियो । त्यो सबै किसिमको क्रान्तिस्थल र विकासको सुरुवातकर्ता आज रसिया र अमेरिकाको तानातानमा परेको छ ।
सायद यही कुराको हेक्का राखेर होला फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुयल म्याक्रोले केही अघि ठूलो उद्घोष गरे । अब रुस, चीन र अमेरिकालाई समेत काउन्टर दिनसक्ने युरोपको सैन्य शक्ति हुनेछ भन्ने उनको भनाइ थियो । यदि यो पूरा भयो भने संसारका लागि ठूलो कुरा हुनेछ ।
पछिल्लो समय भूराजनीतिसँग जोडिएका यी दुई ठूला घटनाहरू थिए ।
सिङ्गापुरको सेनामाथि इजरायली मोसादको प्रभाव
आज हामी दक्षिण चीन सागर र मलाका स्ट्रेटबारेमा चर्चा गर्नेछौँ । मलाका स्ट्रेटको बारेमा त योभन्दा अघिको सातौँ प्रस्तुतिमा मैले बताइसकेँ । मलाका स्ट्रेटलाई नियन्त्रण गर्नका लागिनै सिङ्गापुर भन्ने ‘सिटी’ राज्य बनाइएको हो भन्ने पनि हामीले कुरा गरिसक्यौँ ।
यहाँ जोड्दा उपयुक्त होला, अहिले चाहिँ म ली क्यान यूको ‘थर्ड वल्र्ड टु फस्ट वल्र्ड’ भन्ने ली क्वान यूको आन्त्मवृत्तान्त पढिरहेको छु । त्यो आत्मवृत्तान्तको सुरुमै उनले के लेखेका छन् भने स्वतन्त्र भएपछि सिङ्गापुरमाथि सेना बनाउनुपर्ने आवश्यकता आइपर्यो ।
तर, सिङ्गापुरले सेना बनाउने भन्नासाथ मलेसियाले विरोध गरिहाल्थ्यो । मलेसियाको सहयोग नपाएपछि उसलाई अफ्ठ्यारो आइलाग्यो । आफ्नो देशको सेना बनाउनका लागि जनशक्तिलाई तालिम त दिनुपर्यो । तालिमको लागि लीले सबैभन्दा पहिले भारतका तत्कालीन लालबहादुर शास्त्रीलाई भनेका रहेछन् । तर मलेसियासँगको एकदम राम्रो सम्बन्धलाई देखाएर उनले पनि सिङ्गापुरको सेना बनाउने प्रस्ताव अस्वीकार गरिदिए ।
अन्य राष्ट्रले पनि मलेसियासँगको सम्बन्धको कारण देखाउँदै सिङ्गापुरलाई यो कुरामा सहयोग गर्न मान्दैन । यता, अब कम्युनिस्ट राज्य भएकाले चीनसँग सहयोग माग्ने कुरै भएन । त्यो बेला फेरि चीन राष्ट्रसङ्घको सदस्य पनि थिएन । पछि दौडधुप गर्दा–गर्दा अन्तिममा इजरायलले सहयोग गरिदिएको रहेछ ।
यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो । सिङ्गापुरमा तीन समुदाय भए पनि त्यहाँ रक्षामन्त्री चिनियाँ समुदायकै मात्र बनाइन्छ । अन्य समुदायहरूमा मले र भारतीय समुदाय पर्छन् । त्यो बेला इजरायलले सहयोग गर्ने बेलामा लीले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्मा रहेका मले समुदायका मन्त्रीहरूलाई समेत थाहा दिएका रहेनछन् ।
उनीहरूले थाहा पाउलान् भनेर इजरालयको जासुसी संयन्त्र मोसादको सदस्यहरूलाई अरू कतैको मानिस भनेर सिङ्गापुर ल्याइएको थियो । उनीहरूबाट तालिम दिलाएर सिङ्गापुरको सेना खडा गरिएको थियो । त्यसैले सिङ्गापुरको सेनाभित्र मोसादको प्रभाव स्थापनाकालदेखि नै रहेको छ । यो निक्कै महत्त्वपूर्ण कुरा हो ।
खशोग्गीको हत्या साउदी युवराजलाई फसाउने रणनीति अन्तर्गत भएको हुनसक्छ
श्रीलङ्काको भूराजनीतिक अवस्थिति र आजको सङ्कट
यसरी दक्षिण–पश्चिम हिन्दमहासागरको जल–पारवाहनको भू–राजनीतिमा फसेका छन् माल्दिभ्स र सिसेल्स
भारतको महत्वकाङ्क्षा र त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने अमेरिकी अस्त्र जसको द्वन्द्वले भारतीय मुद्रामा संकट निम्तायो
अमेरिकामाथि दबाब राख्न सक्ने साउदीको शक्ति
स्ट्रेट अफ हरमुजको महत्व बढाउन र घटाउन इरान र साउदी अरबबीचको प्रतिस्पर्धा
इथियोपिया : सुखी र आधुनिक राष्ट्र कसरी विश्वको गरिब राष्ट्र बन्यो ?
के छ बब–अल माण्डबमा, जसलाई नियन्त्रण लिने प्रतिस्पर्धामा यमन बनिरहेको छ शक्तिराष्ट्रको युद्धभूमि
भूराजनीतिमा ऊर्जाले लामो समय प्रधान भूमिका खेल्नेछ
भू–मध्यसागरको समून्द्री मार्गः किन बन्दैछ लडाईंको केन्द्र ?
स्पार्टली आइल्यान्डको भूराजनीति
इन्डोनेसियाको रिआउ द्वीप समूहभन्दा पहिले आउँछ, स्पार्टली आइल्यान्ड । एक जना स्पार्टली भन्ने गोरा नाविकको नामबाट यसको नाम स्पार्टली रहेको हो । यति ठूलो क्षेत्रमा ससाना टापुमाझ फैलिएको भए पनि यसको कुनै पनि टापुमा मानव बसोबास छैन ।
अहिले साउथ चाइना सीबाट दिनहुँ विभिन्न खबररू आइरहेका छन् । केही समयअघि बेलायतले त्यहाँ युद्धपोत पठायो, त्यसविरुद्ध कदम चाल्छु भनेर चीनले चेतावनी नै दियो ।
यी ससाना द्वीपहरू, रिफहरू छरपस्ट भएको क्षेत्र हो । यसको ठीकमाथि चीनको हेनान प्रान्त छ । हेनान प्रान्तमुनि पारासेल भन्ने देख्नुहुन्छ । त्यो पारासेलबाट सुरु भएर तल सिङ्गापुरदेखि पर्तिर इन्डोनेसियाको रिआउ समूह छ । योबीचमा द्वीपहरू पूरै छरिएर रहेका छन् ।
चीनको दाबी छ– यी छरिरएर रहेका द्वीपहरूमा परम्परागत रूपमा हामीहरू जान्थ्यौं, हाम्रा मछ्वाराहरू त्यहाँ जान्थे । यता ताइवान जसलाई रिपब्लिक अफ चाइना पनि भनिन्छ, उसले पनि त्यहाँ आफ्नो दाबेदारी प्रस्तुत गर्छ ।
अर्कोतिर भियतनाम, फिलिपिन्स, ब्रुनाई र मलेसियाले पायक पर्ने जति क्षेत्र आफ्नो भनेर दाबी गर्छ । यहाँ भने फिलिपिन्सले दाबी गरेकोमा भियतनामको दाबी छैन । तिमी नै उपभोग गर भनिदिएको छ । त्यस्तै भियतनामले दाबी गरेको ठाउँमा मलेसियाको दाबी छैन । तलका भूभागमा एकअर्काको दाबीमाथि दाबी नपरेकाले झगडा छैन । तर सबैको दाबीमाथि चीनको एकल दाबी छ । त्यसैले एकीकृत रूपमा भियतनाम, मलेसिया, ब्रुनाई र फिलिपिन्सको झगडा चीनसँग रह्यो ।
त्यहाँ रहेका टापुमाथि यी देशले किन दाबी गर्छन् भन्ने कुरा बुझ्न ‘मेरिटाइम ल’ बुझ्नुपर्छ । मेरिटाइम ल अनुसार आफ्नो स्वामित्वमा रहेको द्वीपको समुद्री तटबाट तेह्र माइलको रेडियससम्मको समुद्रमा आफ्नो स्वामित्व रहन्छ ।
यस्तो भयो भने आफूलाई मन नपरेका देशको जहाजलाई त्यही बसेर सिकार खेल्न पनि सकियो । कानुनी अड्चन उत्पन्न गराउन सकियो, कारबाही गर्न सकियो । ती द्वीपहरू आफ्ना भए भने कब्जा गर्ने राष्ट्रको ठूलो व्यापरिक मार्गमा टेरिटोरियल सी बढेर जान्छ । जसले गर्दा त्यो राष्ट्रसँग अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई प्रभावित पार्ने शक्ति बढ्छ । त्यो भनेको सो देशको बार्गेनिङ क्षमता बढ्नु पनि हो ।
त्यो कुरा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका ठूला खेलाडीहरू न जापान चाहन्छ, न भारत नै चाहन्छ, न युरोप चाहन्छ । अमेरिकाले त चाहने कुरै भएन । यसमा इन्डोनेसिया पनि छुटाउनु हुँदैन । इन्डोनेसिया जनसङ्ख्याको हिसाबले विश्वको चौथो ठूलो देश हो भने सैन्य शक्तिको हिसाबले पनि शक्तिशाली छ । उसले पनि चीनको दाबीलाई स्वीकार गर्दैन ।
चीनलाई पनि मलाका स्ट्रेटमा प्रभाव पार्नका लागि त्यहाँ आफ्नो उपस्थिति जरुरी छ । यो कुरा आजदेखिको हैन नि । अहिले स्पार्टली आइल्यान्डको नाममा विवाद देखिएको छ । विगतमा यही थेसिसमा कम्बोडियामा लडाइँ भएको हो ।
कम्बोडियामा पर्दा पछाडि अमेरिकाको सहयोगमा चीनले पोलपोर्टलाई खडा गरेको हो । कति मान्छे मारिए, त्यसविरुद्ध तत्कालीन सोभियत सङ्घ लागेको होइन ? पोलपोर्टको शासन पल्टाउने काम त सोभियत सङ्घको सहयोगमा भियतनामले गरेको हो । फेरि काम पनि त्यस्तै भयो । भियतनामी मूलका कम्बोडियालीहरूमाथि पोलपोर्टले जातीय नरसंहार नै गरेको हो । मार्न त अरूलाई पनि मारेको हो तर सबैभन्दा बढी मुसलमान र भियतनामी मूलकालाई मारे ।
त्यसपछि हेम्सा मरिनको जुन सरकार आयो, त्यसलाई भारत र सोभियत सङ्घको समर्थन थियो । चीन र अमेरिकाले मान्यता नै दिएन । उनीहरूले पछिसम्म खमेर रुजलाई नै समर्थन गरेका थिए, राष्ट्र सङ्घमा पनि खमेरुजलाई प्रतिनिधित्व गर्न लगाएका थिए ।
पछि राजा र खमेर रुज छाडेका र अहिलेका प्रधानमन्त्री हुन सेनहरूमा संवाद गराएर राजनीतिक समझदारी गराउने पनि चीन नै हो । राजा नरोद्धम सिंहानुक भागेर चीनमा नै निर्वासित भएर बसेका हुन् ।
राजा र पोलपोर्टको पनि राम्रै सम्बन्ध थियो । त्यही समुद्री नाकालाई नियन्त्रण गर्नका लागि त्यहाँ त्यत्रो युद्ध भएको हो । बनियाँको दुनियाँमा कोही आफ्नो हुँदैन, आफ्ना लागि आफैले गर्नुपर्छ । होइन भने अर्काको दयामा बस्नुपर्छ । कम्बोडियामा पनि गरेको त्यही हो ।
स्पार्टली आइल्यान्डको विवादको अर्को पक्ष पनि छ, त्यहाँको प्राकृतिक ग्यास । चीनलाई अहिले सबैभन्दा चाहिएको भनेको ऊर्जाको स्रोत हो । त्यो क्षेत्र सबै कब्जा गर्न पाइयो भने ऊर्जाको ठूलो स्रोत उसलाई प्राप्त हुनेछ । त्यसैले चीन अहिले मरिहत्ते गरेर लागिपरेको छ । उसले सामुद्रिक पारवाहनको म प्रत्याभूति दिन्छु तर यो ठाउँ मलाई चाहिन्छ भनिरहेको छ ।
चीनको दाबीमा पछिल्लो समय फिलिपिन्सका राष्ट्रपति दुतत्रे केही लचक भइरहेका छन् तर अरू भने त्यसमा टसको मस भएका छैनन् ।
मलाका स्ट्रेट आफ्नो कब्जामा नहुँदा पनि यो साउथ चाइना सी आफ्नो कब्जामा भयो भने त्यो क्षेत्रको इन्डोनेसियाबाहेका सबैको व्यापार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने चीनको बुझाइ छ । यसबाट जापान, अमेरिका र भारतमाथि दबाब पर्छ ।
अहिले चीनका दुई ठूला चासोहरू छन् । पहिलो भनेको सामुद्रिक सुरक्षा । हिन्द महासागर र प्रशान्त महासागर एउटा पनि आफ्नो पक्षको राष्ट्र नभएको र आफ्नो नियन्त्रण नै हुन नसक्ने स्थानमा निर्भर रहेका कारण उसलाई ठूलो सुरक्षा थ्रेट छ । यही कारण उसले यो क्षेत्रका अन्य राष्ट्रहरूसँग सौदाबाजी गर्दा उसले उठाउने सबैभन्दा ठूलो सवाल यही पारवाहन सुरक्षाको विषय हो ।
दोस्रो भनेको चीनमा दुई खालका बासिन्द बस्छन् । एउटा चीन राष्ट्रको सांस्कृति राष्ट्रियता बोक्ने जाति, त्यो भनेको हान जाति । उनीहरू चीनको पूर्वी र पूर्वदक्षिणी क्षेत्रमा बढी सघन रूपमा बसोबास गर्छन् । पश्चिमतिर चाहिँ यीभन्दा फरक अल्पसङ्ख्यक जातिहरूको बसोबास छ । तिनमा मङ्गोल, मन्चु, तिब्बत अनि उइगुरहरू प्रमुख पर्छन् । त्यो ठाउँको अखण्डतामा उसले आफैले आशङ्का गर्ने गरेको छ ।
यी दुईटा चुनौतीहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो सौदाबाजी केन्द्रित गर्ने हो उसले । यो सौदाबाजी गर्ने क्रममा स्पार्टली आइल्यान्ड महत्त्वपूर्ण छ, उसका लागि स्पार्टली आइल्यान्ड महत्त्वपूर्ण छ । यही कारणले उसले त्यहाँ भरसक आफ्नो जङ्गी बेडाहरू पनि पठाउँछ । सक्यो भने एक दुई विमानस्थल बनाएर सेनाहरू पनि राख्ला । तर साउथ चाइना सीमा संसारकै ठूलो युद्ध सुरु हुन सक्ने ‘फ्लास पोइन्ट’ हो स्पार्टली आइल्यान्ड ।
‘लकडाउन’ र त्यसको सम्भाव्य दुरुपयोग
‘कोरोना भगाउन’ बालिएको दियो : विपत्तिमा परेका मानिसहरुको उपहास
काठमाडौँका चार पालिकामा तारामण्डलद्वारा राहत सामग्री हस्तान्तरण
जापानमा संकटकाल घोषणापछिको पहिलो दिनमै कोरोना सङ्क्रमितको संख्या ह्वात्तै बढ्यो
कोरोना रोकथामका प्रयासबारे मुख्यमन्त्री पोखरेलद्वारा भिडियो संवाद
प्रधानसेनापति थापाद्वारा अधिकृत क्याडेटलाई आयुक्त पद प्रदान
राष्ट्रपति भण्डारीबाट बेलायती प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यलाभको कामना
युएईमा एकैदिन ३०० जना नयाँ कोरोना भाइरस संक्रमित भेटिए
दक्षिणी नाकामा दुई किलोमिटरको अन्तरमा सशस्त्रको सुरक्षाचौकी
कोभिड–१९ : कुन क्षेत्रमा काम गर्नेको रोजगारी बढी सुरक्षित ?